TAMAANDHO U ADKAYSTA PHYTOPHTHORA: SHARAXAAD IYO SAWIR NOOCYO CAAN AH - NOOCYO YAANYO
Mid ka mid ah xanuunka ugu caansan ee saameynaya yaanyada waa wax xun. Cudurkan ugu halista ah waxaa mararka qaarkood lagu gartaa sida cudurka daacuunka iyo kansarka ee yaanyada.
Waxay u dhacdaa badi sababtoo ah la'aanta qoraxda iyo qoyaanka xad dhaafka ah. Fungus wuxuu ku dhuftey caleemaha marka hore, ka dibna geedka oo dhan. In kiisaska horumarsan, duurka u dhintaan.
Khubarada ayaa aaminsan in faafidda sida weyn ee cudurku uu sabab u yahay xaqiiqda ah in noocyada koonfurta ee yaanyada la koray ee xaaladaha cimilada ee aad u haboon.
Dabcan, waxaa jira habab badan oo agrotechnical ah, kiimikada daaweynta abuurka, seedling, geedo iyo dhirta bisil, iyada oo taas oo cudurku ka hortagi karo. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa in kala duwan ee yaanyada oo adkaysi u leh dabaylo goor dambe waa la dubay.
Halkii ay la dagaallamayaan cudurka, way ka sii fiicnaanaysaa in laga hortago, iyo dhirta dhirta oo aan u nugulnayn jirro, waa tallaabada ugu fiican ee looga hortago.
Xilliga ugu sarreeya ee cudurkan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qeybta labaad ee xagaaga, sababtoo ah waqtigan xaadirka ah roobabku waxay bilaabmeen roobab badan iyo dhoobo, iyo qorraxdu way yar yahiin - dhammaantood waxay abuuraan xaalado wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta fungal fungal waxyeelo leh.
Sidaa darteed, inta badan noocyo u adkaysta phytophthora ee yaanyada ka mid ah Bisaylkiisa hore ama dhexe.
Kala duwan yaanyada hore, taas oo horayba u koraysa 90-95 maalmood ka dib markii la beero. Tamaandhada, sida magaca ayaa tilmaamaya, waa yar yihiin, 40-45 g mid kasta, qaab wareegsan. Midhaha miraha waxaa loo tixgeliyaa qaabab badan oo ku haboon si loogu isticmaalo foomka cayriinka iyo ilaalinta.
Wixii kala duwan waxaa lagu gartaa by helitaanka dalagga daggan, taas oo u bislaadaan waqti isku mid ah, iyo dhadhan fiican.
Ma taqaanaa? Kumanaan dalxiisayaal ah ayaa u yimaada magaalada Iskuulka Bunol sanad walba si ay uga qaybqaataan dabaaldega "La Tomatina". On waddooyinka magaalada toddobaadkii ugu dambeeyey ee Agoosto dagaal dabiici ah oo dhab ah ayaa bilaabanaya - dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ku tuuraan yaanyada midba midka kale. Kuwa had iyo jeer booqday dhacdadan, xusuusnow in fasaxu yahay mid aan caadi ahayn oo xiiso leh.
Fasalku wuxuu helay darajada "akadeemiyadda" sabab. Marka hore, muuqaalkiisa gaarka ah waa mid dheer, iyo labaad - miraha aad u ballaaran.
Dhirta aan caddayn dhirta ayaa koraaya ilaa 2.5 m, iyo midhaha ay u bislaadaan, miisaanka ilaa 0.5 kg.
Tamaandhada cas cas oo leh jilicsan oo jilicsan ayaa dhajin doona miis kasta, iyo suugaanta ama ketikada laga sameeyay iyaga kama tagi doono xitaa xitaa gurriga si fiican loo yaqaan. Harvest waxa la samayn karaa gudaha 105-115 maalmood ka dib marka la beerto.
Yaanyada Kuwani, adkaysi u leh phytophthora, waxaa loogu talagalay beeritaanka dhul furan. Waxay yihiin arrin goosad ah oo hore u bislaaday. Miraha wareega yaanyada 50-65 g.
Burburka laftiisu waa mid aad u sarreeya, dhererkiisu ugu sarreeya waa 50 cm. Sababtoo ah xaqiiqda ah in geedka u dulqaadanayo qabow, waxaa lagu beeray badanaa hore ka badan noocyo kale, iyo ma jiri doono.
Laga soo bilaabo hal baadiyaha ah 90-110 maalmood waxaad ka qaadan kartaa ilaa 3 kg ee yaanyada, casaan leh.
Waa muhiim! Weligaa ha abuurin yaanyada meel u dhow barafka, maadaama uu yahay kii ugu horreeyey ee bilaaba inuu waxyeello ka soo daahay dabayaaqadii dambe, iyo in uu ku dhowaadaa wuxuu keeni karaa cudurka infakshanka yaanyada.
Wakiilka Varietal ee yaanyada, kaas oo leh dhalid wanaagsan. Heerkulka geedku marar dhif ah ayuu ka badan yahay 50 cm, miraha miisaankoodu yahay 100-120 g, midabkoodu waa caraf udgoon.
Yaanyadaas waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan, waxay ku fiican yihiin labadaba qaab caano, iyo qayb ka mid ah saxanka ama ilaalinta. Mid ka mid ah baadiyaha waxay koraan ilaa 3 kg oo ah alaab tayo sare leh.
Iska hubi siyaabaha ugu fiican ee loo beeri karo yaanyada xilliga jiilaalka.
Noocyo kala duwan oo yaanyo, taas oo ah mid ku habboon koritaanka aqalka dhirta lagu koriyo oo loo arko mid aad u adkaysi u leh dabaylo goor dambe. Dhallin xoog leh oo sredneroslye waxay awoodaan inay bixiyaan goosashada 15-20 kg, oo ku xiran xeerarka injineeriyadda beeraha.
Midhaha ayaa leh dhadhan aad u fiican waxayna ku habboon yihiin labadaba miiska iyo ujeedooyinka ilaalinta, taas oo ah, waa mid guud. Yaanyadaas waxaa lagu kobcin karaa iibka, maadaama xitaa gaadiidka mudada dheer uusan saameyn ku yeelan doonin wax soo jiidashada.
Ogow waxa yaanyada jirran ee lagu koriyo.
Kala duwanaansho, oo si fudud u saameeya heerarka Bisaylkiisa: miraha waxay gaaraan bisil ka dib 80 cisho ka dib markii la beero dhul furan. Heerka geedku wuxuu dhifiraa 85 cm.
Xitaa xaaladaha cimilada ugu xun, miraha way u bislaadaan. Laga bilaabo 1 jibbaaran. m beeray dalagyada ayaa laga goyn karaa ilaa 15 kg dalagga.
Ma taqaanaa? Tamaandhada waxaa ku jira xaddiyo badan oo serotonin ah - "hormoonka farxada", sidaas darteed joogitaanka cunto ee casiir leh, midhihii bislaaday ayaa ka caawiya inuu kiciyo niyaddaada iyo xitaa la dagaallanka buruqda.
Yaanyadaas waxaa loo tixgeliyaa goor hore sababtoo ah waxay u bislaadaan 80-95 maalmood ka dib marka la beerto. Buundooyinku waa kuwo isdhaafsan oo aan lahayn laanta. Warshadu waa mid aan qabyo ahayn. Miraha ayaa isku darsamaya oo dhadhan fiican leh.
Waxay si fiican u kaydsan yihiin, si fiicanna u ilaaliyaan bandhigga inta lagu jiro gaadiidka. Yaanyadaas waa la cusbayn karaa oo la kariyaa, iyo sidoo kale inay cunaan cusub.
Waxay ka mid yihiin nooca aan caadiga ahayn, kaas oo sharaxaya dhererka weyn ee geedkii, illaa 130 cm. Yaanyadaas waxaa lagu beeray goobo cadceedsan oo furan iyo meelo qallalan, waa kuwo aad u kulul iyo abaaro u adkaysta.
Ka dib 95-100 maalmood kaddib marka uu biqlo soo baxo, geedku wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho. Miraha waa weyn, 250-300 g mid kasta. Waxaa lagu gartaa midabka casaanka iyo qaabka wareegsan. Tamaandho ayaa si weyn loogu keydiyaa sababtoo ah cufnaanta cufan, cufnaanta culus.
Yaanyadaasi waxay ku habboon yihiin beeritaanka berrin furan, sida ay u bislaadaan waqti hore (90 maalmood). Phytophthora iyo jeermisku ma baqayaan. Midnimada noocyada kala duwan waxay tahay in aysan u baahnayn daryeel gaar ah, uma baahnid in la xiro iyo xijaab.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad barato sida loo saxo yaanyada yaryar ee aqalka dhirta lagu koriyo iyo beerka furan.
Miraha way yar yahiin, 40-45 g mid kasta, waxay leeyihiin qaabka oval. Yaanyada bislaado noqdaan casaan cad. Ujeeddo - universal, ku haboon ujeedooyinka cunta, iyo sidoo kale diyaarinta jiilaalka.
Warshad go'aamiye ah, taas oo ay kala soocday iyada oo aan la qabin. Si aad u koraan dalagga wanaagsan ee yaanyada sida waa suurto galsan xitaa gabbalaha bilawga ah. Midabyo qurux badan, wareegsan iyo casaan ah ayaa la soo ururin karaa 90 ilaa 100 maalmood.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwanaanta waxaa ka mid ah dhalid heer sare ah iyo suurtogalnimada kaydinta muddada dheer ee khudaarta.
Waa muhiim! Si looga fogaado dhacdooyinka cudurada fangas, waxaa lagu talinayaa in si habboon loo waraabiyo. Tamaandhada waxaa la waraabiyaa xididka, iyo kiiskuna kama badin karo.
Fasalka hore ee bislaaday, goosashada waxaa la heli karaa 95-ka maalmood ka dib soo baxa caleemaha. Buundadu waa xoog, yar oo cabbirka, sida ay yihiin miraha ka dhalata iyaga, sidaas darteed uma baahnid in aad adkaato oo aad xirto.
Miisaanka khudradda cagaarka ah waa qiyaastii 50 g, dhadhanka ayaa lagu gartaa celcelis ahaan. Yaanyadaas waxaa badanaa loo isticmaalaa soo saarida noocyo kala duwan iyo casiir.
Ku qadarin fasal si aad u sareeya, wax soo saarka iyo ilaalinta muuqaal la soo bandhigo xittaa gaadiidka dheer.
Kala duwanaanta noocaan ah waxaa lagu koray beerta furan. In height of geed ku gaaro 50-60 cm, halka aan u baahnayn of garter iyo guntimaha.
Fruiting fruiting ee 100-105 maalmood ka dib markii laga beerto. Yaanyada bislaadaan waxay miisaankoodu dhan yahay 60-120 g. Waxay u eg yihiin qaab isku dheelan, qaab yar oo isku dhafan. By waqtiga Bisaylkiisa, midhaha miraha noqdaan casaan.
Kala duwan ee yaanyada ma aha oo kaliya iska leh dhirta diidmo dabayaaqadii goor dambe, taas oo ku habboon beerto aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrin furan, laakiin sidoo kale waa daaweyn laftiisa.
Miraha ka mid ah geedkan waxaa ku jira beta-carotene faa'iido leh. Buundooyinka waxay gaaraan dherer ah 50-60 cm, iyo midhaha soo koraya iyaga oo miisaankoodu yahay 50-70 g oo leh qaab cylindrical ah.
Kala duwan waxaa lagu qaddariyaa unpretentious, dhalidda degan oo xasilan iyo faro badan ee tamaandhada, maadaama ay labaduba fiicnaadaan labadaba iyo sidoo kale bangiyada.
Waa muhiim! Si looga hortago dhacdada phytophthora on yaanyada, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo talooyinka ku saabsan wareegga dalagga. Sidaa darteed, tusaale ahaan, dhaqanka aan la beerin ka dib karootada sii kordhaysa, basasha, qajaarka, xididdo iyo tufaaxa beerta.
Sare u sareeya, kala duwan oo Bisaylkiisa hore. Sida magaca ayaa tilmaamaya, uma baahnid daryeel gaar ah, laakiin waqti isku mid ah waa mid aad u badan fruiting oo leh tayado dhadhan sare leh.
Laga soo bilaabo hal baadiyaha "caajis" waxay soo ururiyaan 6-7 kg oo yaanyo ah. Tamaandhada waxaa loo isticmaali karaa saladh iyo khudradda qudaarta, iyo sidoo kale samaynta casiirka iyo baastada; qalajinta miraha sidoo kale waa la ogol yahay.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kor ku xusan yihiin adkaysi u tahay phytophthora, tani ma aha 100% damaanad ah in dhirta ma xanuunsado. Waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka injineeriyadda beeraha, waqtigeeda si ay u quudiyaan iyo geedisocodka kaabajka ah ee geedaha. Iyada oo habka isku dhafan sida, waxaad hubaal noqon doontaa in aad ka soo goosan dalagga wanaagsan ee khudraddaas dhadhan fiican leh.